Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: Wadaniyoow Kahor Intaadan Eedaynin Ururka ONLF Bal Horta Lakulan! By- Xaaji M/rashiid.
Maqaal: Wadaniyoow Kahor Intaadan Eedaynin Ururka ONLF Bal Horta Lakulan! By- Xaaji M/rashiid.
Posted by Wariye Qaran	/ November 14, 2018
Waxaan marka hore dulmar guud ku sameynayaa hadii Rabi idno mudadii Rubuc’qarniga ahayd ee Ururwaynaha ONLF/JWXO uu hardanka naf hurida ah kula jiray maamulkii guumeystaha ahaa ee ay gadhwadeenka ka ahaayeen Kooxdii TPLF ee Bilo kahor daadku qaaday. Asalka dagaalku wuxuu ahaa waan jirayaa iyo majiraysid, hase yeeshee dad badan oo wax garad ayaa rumaysnaa inay arintu ku dambayn doonto sidan ay maanta wax udhaceen oo ah in kuwii awooda is bidayay sheegoodba lawaayo, meesha xaq udirirkii ay si firfircoon uga dhex-muuqdaan siyaasada dalka iyo dibadaba.
Markuu dagaalku socday 18 sano ayuu R-Wasaarihii itoobiya Meles Zenaawi wuxuu garwaaqsaday inayna suurto gal ahayn in lasoo afjaro dagaalka adag ee mandiqada Ogadenya ka holcaya hadaan wadahadal toos ah lagalin madaxda Jabhada. Waxaa jirtay oo kale in dhanka jabhada laga go’aamiyay inaan wadahadal lala furi karin nidaamka itoobiya kataliya hadaan lahelin laba shardi, kan hore oo ah in la helo waddan dhexdhexaad ah iyo sidoo kale in lahelo goob,joogayaal makhraati ah. Meles Labada shardiba wuu aqbalay waxaase xusid inuu wafaaday isla sanadkii uu wadahadalka lafuray ONLF oo ahaa 2012,kii.
Markii intaa laga yimaado waxaa xigay in maamuladii isaga ka danbeeyay ay halkii kasii wadeen wada xaajoodka, balse laga waayay wax go’aan qaadan kara dhankooda taasooy ay sabab u aheyd haykalkii dawladnimo iyo kala danbayntii oo meesha kabaxay. Waxay ka danbeysay kadib markii ay talada dalku gacanta ugshay koo askar ah oo isla qaadatay inayna maslaxadi ugu jirin hashiis laga gaadho Qadiyada Ogadenya. Ururku marwalba diyaar buu ahaa mana jirin wax dib udhac ah oo xagiisa ka imaanayay.
Waqtigan lajoogo waxaa muuqda inuu isbadal balaadhani ka dhacay guud ahaan itoobiya kaasoo uu hogaaminayo Dr- Abiy Ahmed, Laba tilaabo oo wanaagsan ayuu qaaday, Tan hore wuxuu ooda kaqaaday maxaabiis muhiim ahaa oo siyaasadeed, ta labaadna wuxuu gabi ahaanba laalay qaynuunkii dulmiga ahaa xaq u dirirka ku tilmaamayay argagixiso! jabhadda ONLF oo kajaawabaysa arimahaas ayaa ku dhawaaqday xabad joojin dhankeeda ah kadibna wafdigii ugu horeeyay ayaa kadegay Adis Ababa iyagoo uga sii gudbay Ogadenya.
Dadka wadanku waxay jabhada ka haysteen aragtiyo kala duwan sida dhalinyaro badan oo hana qaaday ama dhalatay intii dagaalku socday iyo sidoo kale qaar aan waxbadan ka fahansaneyn siyaasadda dhabta ah ee jabhadda. Waxaa iyaguna jiray kuwo kale oo Ururka u arka hal qabiil oo soocan!. Hadaba umada noocaas ah ayay jabhadu dhexgashay, iyagoo la kulmay bulshada qeybaheeda kala duwan, sida Salaadiinta, madaxada maamulka, Culimada iyo Dhalinyarada. Waxaa Dhamaantood loo sharxay mabda’a jabhada loo aasaasay ilaa hadafka oo isku xidhan.
Ilaa waqtigan kulamadu si isdaba joog ah ayay usocdaan lamana sheegin fadhi lagu kala kacay ama qilaaf soo dhexgalay. Dhamaan umadii soomaaliyeed ee wufuuda jabhada lakulantay way qanceen markay xaqiiqadii soo taabteen. Dhanka kale waxay bulshadu soo gudbisay su’aalo farabadan, waxaana laga siiyay jawaabo waafi ah waana mida keentay inuu ruux waliba yidhaaho- sidan maana moodaynin!. Sidaa darteed waxaan kula talinayaa shakhsi kasta oo eedayn uhaya Ururka ONLF inuu la kulmo saraakiisha jabhada kahor intuuna tilaabo qaadin!.
Dadka halgamayaasha ah ma mudna in eedayn bilaash ah dusha laga saaro, mana aha in la yidhaaho maxaad u halgameysaa haduuna qabiilkanagu kula soconin. Bal horta wax is waydiini ma xumee, majiraa ruux damcay inuu jabhada xubin kanoqdo oo laga horjoogsaday? Haduu jiro wuxuu xaq uleeyahay inuu soo bandhigo dhacdadaas iyo goortay aheydba, Waxaan ognahay in Albaabka Ururku ufuranyahay cidkasta oo doonta inay kubiirto, haduuba jiro shardi ku xidhan arinkaas, waa kaliya inuu qofku qadiyada soomaaliyeed aaminsanyahy.
Waxaa la ogyahay in nafta bani’aadamka ahi ay deefta jeceshahay dhibkana ay necebtahay. Sidoo kale way adagtahay in dhibka lagula wadaago wayse sahlantahay in dheefta gedaanka lagula qabsado. Hadaan intaa kudhaafo marxaladihii hore wuxuu halganku haatan galay waa midii Qalinka mana jirto wadaniyoow cid adoo iska fadhiya xaqaaga ku gudoonsiineysa, Hangoolkii iyo Gantadina isku geed bay kuyaalaane halaga fakaro siidii loo goosan lahaa. Dadkii kudoodi jiray hadaan halganka kubiiro Qoyskeyga ayaa la gumaadi bal maxay maanta marmarsiiyo kadhigan doonaan hadii saaxada laga waayo!. Mida kale kuwa lasoo taagan Jabhadu waa qabiil xagay ku arkeen qabiil soomaaliyeed oo Rubuc,Qarni dagaal xidhiidh ah kujira! Maya, ee dagaalku wuxuu lamid ahaa kii Sayid Maxamed Cabdulle Xasan ee umadda soomaaliyeed kawada Qeybqaateen.
Halgan waa uun halgan, haduu Qori ku tiirsanyahay iyo haduu Qalin ku tiirsanyahayba, midkoodna ma sahlana, waana iska caadi ah in wajiga hore ay dadka xamaasadi qaado, balse markuu mudo socdo lakala hadho. Si kastaba ha ahaatee waxaan Baaq u dirayaa guud ahaan wadaniga kusugan gudaha Ogadenya/Somali State ama dibadaba inay xaadiraan goobaha ay umadu kaga tashaneyso aayaheeda, Gaar ahaan kulamada ay kawaadirta jabhadu ku bixinayaan siminaarrada maskaxda iyo garaadka bulshada lagu korinayo. Wadaniyoow ogaada jabhada ONLF gaf wuu kadhici karaa in la saxana way soo dhaweynayaan sida ay marar badan sheegeen.
Isku soo wada duuboo haduu ruuxa bukaayi isbiltaalka tago rajuu leeyahay, Sidoo kale haduu kan siyaasad xumida la bukaayi ka qeybgalo kulamada lagu faaqidayo siyaasadda halganka isaguna rajuu leeyayhay.